M/weyne Shariif iyo R/wasaare Gaas oo si wadajir ah uga hadlay bixitaankii Al-shabaab iyo boobkii xerada Badbaado. – Radio Daljir
M/weyne Shariif iyo R/wasaare Gaas oo si wadajir ah uga hadlay bixitaankii Al-shabaab iyo boobkii xerada Badbaado.
Muqdisho, Aug 06 – M/weynaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya iyo R/wasaarihiisa Gaas, ayaa maanta si wadajir ah uga hadlay bixitaankii Al-shabaab ee magaalada Muqdisho iyo boob iyo bililiqaysi shalay ka dhacay xerda barakacayaasha ee Bad-baado ee ku taalla Muqdisho.
M/weyne Shariif Sh Axmed iyo R/wasaare Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ‘Gaas’ oo shir jaraa’id ku qabtay aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa sheegay guushii ugu weynayd haatan in ay u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed maadaama Al-shabaab laga taag-roonaaday wixii harayna ay iskaga baxeen magaalada caasumadda ah ee Muqdisho.
Madaxda sar sare ee dawladdu, waxay si wadajir u tilmaameen arrintaani in ay tahay mid la filayey kaddib markii ciidamadda dawladda iyo ku garab-siiya ee AMISOM ay muddooyinkii u dambeeyey ay laban-laabeen weerarada lagu qaadayo fariisimada ururka Al-shabaab ay ku laaahyeen magaalada Muqdisho taasoo ah midda dhalisay in ay iskaga baxaan magaalada Muqdisho oo ka mid ahayd halbawlayaasha ay ku dhaq-dhaqaaqaan.
Mas’uuliyiintu waxay u mahad-celiyeen ciidamada dawladda iyo kuwa nabad-ilaalinta ee AMISOM, iyagoo uga hambalyeeyey guulaha waaweyn ee ay ka gaareen dagaalladii ay kula jireen kooxda Al-shabaab, waxaana ay tilmaameen in aan wali laga sal-gaarin ujeeddooyinkii dawladda ee ku wajahnaa ka-takhalusidda Al-shabaab walina la sii wadi doono halgalka iyo dagaalka lagula jiro kooxdaasi.
M/weynaha Shariif Sh Axmed ayaa sheegay dawladdiisa in ay horyaalliin tallaabooyin aad u miisaan culusi kuwaasi oo ay ugu horrayso sidii loo xasilin-lahaa amnigoodana loo sugi lahaa dhammaan goobihii iyo deegaannadii ay banneeyeen Al-shabaab .
M/weynuhu waxaa uu shacabka uga digay galidda iyo ku daqaqamidda dhulkii ay faaruqiyeen Al-shabaab kuwaasi oo madaxweynuhu uu sheegay in ay suurtagal tahay in ay ku aaseen dhagar iyo dhibaateeyayaal kale oo shacabka lagu lug-goonayo, waxaana uu intaasi ku daray in ay qorshaynayaan khuburo goobaasi baaritaanno ku samaysa ka hor in aan la deegaamayn.
M/weynaha iyo R/wasaaruhu waxay dhinaca kale si wadajir ah uga hadleen dhacdadii shalay lagu weeraray xerada Bad-baado ee magaalada Muqdisho, weerarkaasi oo ay ku dhinteen dad ku dhaw 10 ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana ay falkaasi ku tilmaameen mid arxan-darro ah dad aragti gaabanina ay fuliyeen.
Mas’uuliyiintu, waxay ballan ku qaadeen in ay caddaaladda horkeeni-doonaan dadkii falkaasi ka dambeeyey oo ahaa kuwo ku labbisan daraysta dawladda, inkastoo aan wali la aqoonsan jaihada ay ka tirsanaayeen.
Shirkaan jaraa’id ee m/weynaha iyo R/wasaaraha ayaa yimid kaddib markii xalay saqdii-dhexe magaalada Muqdisho fariisimadii ay ku lahaayeen Al-shabaab ay banneeyeen, shir jaraa’id oo laftigoodu ay qabteenna ay ku caddeeyeen ka bixidda magaalada Muqdisho.